GỤỌ NKE Afrikaans Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Hiligaynon Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian
Ọ BỤ n’abalị. Ahụ ruru gị ala ka i dina n’àkwà gị. Mgbe ahụ ya amalite—ihe ahụ na-eyi ka ihe ọ̀ na-arị gị n’ime ụkwụ. Ị pụghị ileghara ya anya. Nanị ụzọ isi kwụsị ya bụ site n’ibilite ọtọ ma gagharịa. Ịga ije na-enye aka, ma mgbe i dinara ala ọzọ, ihe ahụ amalite ọzọ. Ị chọrọ ihi ụra, ma i nweghị ike. Ọ bụrụ na nke a yiri ihe na-eme gị, ọ bụghị nanị gị ka ọ na-eme. Dị ka ihe atụ, ma eleghị anya ihe ha ka pasent 15 nke ndị bi na United States nwere nsogbu a.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị dọkịta taa adịghị achọpụta ma ọ bụ agwọtacha nsogbu a, ọ maliteghị ọhụrụ. Na 1685 otu dọkịta dere banyere ndị aka na ụkwụ ha “na-ama nnọọ Jijiji” mgbe ha dịnara n’àkwà, nke na ha “adịghị enwe ike ihi ụra, dị ka a ga-asị na ha nọ n’Ebe A Na-ata Mmadụ Ahụhụ kasị njọ.”
Otu n’ime nsogbu ndị e nwere n’ịghọta nsogbu a bụ na e nweghị nnyocha a na-eme n’ụlọ ime nnyocha nke pụrụ ịchọpụta ma mmadụ o nwere ya. A na-eji mgbaàmà ya amata ya. Dọkịta ma nke a na-akọ pụrụ ịjụ, sị: ‘Ọ̀ na-adị gị ka ihe ọ na-arị gị n’otu ụkwụ ma ọ bụ n’ụkwụ abụọ? Ọ̀ dị mgbe ọ na-adị gị ka ọ na-arị gị n’aka? Nsogbu a ọ̀ na-akwụsị ma ọ bụrụ na i bilie ọtọ ma gagharịa, saa ahụ, ma ọ bụ hịa aka n’ụkwụ gị? Ihe nrịgharị ahụ ọ̀ na-amalite mgbe ụfọdụ ma ọ bụrụ na ị nọdụ ala ruo ogologo oge, dị ka n’ụgbọala ma ọ bụ ụgbọelu? Ọ̀ na-akasị enye gị nsogbu n’abalị? Ọ̀ dị onye n’ime ndị ezinụlọ gị na-enwe otu nsogbu a? Onye gị na ya na-ehi ọ̀ na-ekwu na ị na-emegharị ụkwụ g̣ị mgbe ụfọdụ ma ị na-ehi ụra?’ Ọ bụrụ na azịza gị nye ụfọdụ n’ime ajụjụ ndị a bụ ee, dọkịta pụrụ ikwubi na i nwere nsogbu ụkwụ anọghị jii (RLS).
Ndị Nwere Ya
Nye ụfọdụ ndị, RLS bụ obere nsogbu na-enwe mgbaàmà mgbe ụfọdụ. Nye ndị ọzọ, ọ na-adị nnọọ njọ karị, na-akpata ehighị ụra nke ọma ruo ogologo oge, na-akpata ike ọgwụgwụ n’oge ehihie bụ́ nke na-emetụta nnọọ ndụ a na-adị kwa ụbọchị. Otu onye nwere ya na-ekwu, sị: “Ọ na-adị m ka okpo ọ na-arị m n’ime ụkwụ. Aghaghị m imegharị ụkwụ m iji mee ka nrịgharị ahụ kwụsị.”
Nsogbu RLS na-emetụta ma ndị ikom ma ndị inyom, ọ na-emetụtakwa ndị meworo okenye n’ụzọ kasị ukwuu na n’ụzọ ka njọ. A kasị achọpụta ya n’ahụ ndị nọ n’afọ 50 na ụma ha, ọ bụ ezie na mgbaàmà ya na-amalitekarị ọtụtụ iri afọ tupu a chọpụta ya. Mgbe ụfọdụ mgbaàmà ya pụrụ ịmalite laa azụ n’oge a bụ nwata. Otú ọ dị, ọtụtụ mgbe a dịghị ahụ nsogbu RLS n’ahụ ụmụaka. N’ihi na ha na-akpa aghara ma ọ bụ bụrụ ndị na-apụghị ịnọdụ otu ebe, a na-akpọ ndị na-eto eto nwere nsogbu RLS “ndị na-adịghị anọ jii.”
Ọ bụ ezie na ndị ọkachamara ghọtara na RLS bụ nsogbu akwara ozi, ọ na-esi ike ikwu kpọmkwem ihe na-akpata ya. N’ihe ka ọtụtụ ná ndị nwere ya, a maghị ihe kpatara ya. Otú ọ dị, a matawo ihe ụfọdụ na-akpata nsogbu RLS. Dị ka ihe atụ, a na-enwetakarị nsogbu RLS n’ezinụlọ, ndị mụrụ ụmụ na-esi ná mkpụrụ ndụ ihe nketa ebufere ya ụmụ ha. Ndị inyom ụfọdụ dị ime na-enwe mgbaàmà RLS, karịsịa n’ọnwa ndị ikpeazụ nke ime ha. Mgbe ha mụsịrị nwa, nsogbu ahụ na-akwụsịkarị. Mgbe ụfọdụ nsogbu ahụ ike, dị ka ọ̀tụ̀tụ̀ dị ala nke iron ma ọ bụ ụkọ vitamin ụfọdụ, na-akpali mgbakasị ahụ nke nsogbu RLS na-akpata. Ọrịa na-adịghị ala ala pụkwara ịkpata mgbaàmà RLS—karịsịa ọrịa akụrụ, ọrịa shuga, ọrịa rheumatoid arthritis, na nsinwụ akụkụ usoro akwara ozi, mmebi nke akwara ozi ndị dị n’aka na ụkwụ.
Ọchịchọ A Na-achọ Ọgwụgwọ Ya
Ọ dị mwute na nsogbu RLS enweghị ọgwụgwọ, mgbaàmà ya na-akakarịkwa njọ ka afọ na-agafe. Otú ọ dị, akụkọ ọma dịnụ bụ na a pụrụ ịgwọta nsogbu RLS, ọtụtụ mgbe n’ejighị ọgwụ. E nweghị otu ihe e ji agwọ ya; ihe rụrụ ọrụ n’ahụ otu onye nwere ike ghara ịrụ ọrụ n’ahụ onye ọzọ. Ọ dị mkpa ka ndị nwere ya chọpụta àgwà, ihe omume, ma ọ bụ ọgwụ na-eme ka mgbaàmà ya ka njọ ma ọ bụ belata.
Ihe mbụ a ga-eme n’ịgwọ ya bụ ikpebi ma è nwere nsogbu ahụ ike a pụrụ ịgwọta agwọta bụ́ nke na-akpata mgbaàmà RLS. Nye ndị nwere ụkọ iron na vitamin, iji iron na vitamin B12 na-enyere ihe oriri aka pụrụ ịbụ nanị ihe a chọrọ iji kwụsị mgbaàmà RLS. Otú ọ dị, ịṅụbiga vitamin na mineral ókè pụrụ itinye ahụ ike mmadụ n’ihe ize ndụ. N’ihi ya, onye na-enye nlekọta ahụ ike kwesịrị ikpebi ma mmadụ o kwesịrị ịṅụ iron ma ọ bụ vitamin ntụkwasị.
Nye ndị ụfọdụ caffeine na-eme ka mgbaàmà RLS ka njọ. Kọfị, tii, chocolate, na ọtụtụ mmanya ọtọ bịrịbịrị nwere caffeine. Ibelata caffeine ha na-aṅụ ma ọ bụ ịkwụsị ịṅụ ya pụrụ inye aka belata ma ọ bụ kwụsị mgbaàmà RLS. Ịṅụkwa ihe na-aba n’anya na-emekarị ka mgbaàmà ya dịtee aka ma ọ bụ ka njọ. Site n’ibelata ma ọ bụ iwepụ ihe na-aba n’anya n’ihe ha na-eri, ahụ na-adị ụfọdụ mma.
Ịnagide Nsogbu RLS
Ọ bụrụ na i nwere nsogbu RLS, ime mgbanwe n’ụzọ i si ebi ndụ pụrụ inyere gị aka. Ebe ọ bụ na ike ọgwụgwụ na iro ụra na-emekarị ka mgbaàmà ya ka njọ, inwe otu oge i ji alakpu ụra mgbe dum pụrụ ịbụ ezi ihe enyemaka. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee, ọ kasị mma inwe ebe ihi ụra dị jụụ, jụrụ oyi ma na-enye ntụsara ahụ. Ịlakpu ụra n’otu oge kwa abalị na iteta n’otu oge kwa ụtụtụ na-enyekwa aka.
Imega ahụ mgbe nile ga-enyere gị aka ihi ụra nke ọma n’abalị. Otú ọ dị, imega ahụ gabigara ókè n’ime awa isii tupu ị lakpuo ụra pụrụ ịkpata ihe dị iche. Ndị ụfọdụ nwere nsogbu RLS na-achọpụta na mmega ahụ na-agabigaghị ókè nke ha nwere obere oge tupu oge ịlakpu ụra na-enyere ha aka ihi ụra. Nwalee ụdị mmega ahụ dịgasị iche iji chọpụta nke kasị dịrị gị mma.
Egbochila ọchịchọ nke imegharị ahụ. Mgbaàmà ya ga-akakarị njọ ma ọ bụrụ na ị nwaa igbochi mmegharị ahụ. Ọtụtụ mgbe ihe ngwọta ya kasị mma bụ ibilite n’àkwà ma gagharịa. Ndị ụfọdụ na-enweretụ onwe ha site n’ịga ije, ịgbatị onwe ha, iji mmiri ọkụ ma ọ bụ mmiri oyi saa ahụ, ma ọ bụ ịhịa aka n’ụkwụ ha. Ọ bụrụ na ị ghaghị ịnọdụ ala ruo ogologo oge, dị ka mgbe ị na-eme njem, ọ pụrụ inye aka ma ọ bụrụ na i tinye uche gị nke ọma n’ịgụ ihe.
Gịnị banyere ọgwụ? Òtù Na-ahụ Maka Nsogbu Ụkwụ Anọghị Jii, bụ́ nke dị na Raleigh, North Carolina, U.S.A., na-ekwu na “ịmalite usoro iji ọgwụ agwọ ọrịa pụrụ ịdị mkpa.” Ebe ọ bụ na e nweghị otu ọgwụ na-arụ ọrụ n’ahụ ndị nile nwere nsogbu RLS, ọ pụrụ ịdị mkpa ka onye na-enye gị nlekọta ahụ ike chọpụta nke kasị arụ ọrụ n’ahụ gị. Ndị ụfọdụ na-achọpụta na ịgwakọta ọgwụ dị iche iche na-akasị arụ ọrụ. Mgbe ụfọdụ ọgwụ rụrụ ọrụ ruo oge ụfọdụ agaghịzi arụ ọrụ. Ebe ọ bụ na ịṅụ ọgwụ nakwa karịsịa ịgwakọta ọgwụ dị iche iche nwere ihe ize ndụ ahụ ike, ọ dị mkpa iso nnọọ onye na-enye gị nlekọta ahụ ike rụkọọ ọrụ iji mata ihe kasị arụ ọrụ n’ahụ gị.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ị̀ Na-enwe Nsogbu Ụkwụ Anọghị Jii?